विदेशी भूमिबाट नेपालीहरु भन्छन्, ‘सरकार ! गरिब जनतालाई कहिलेसम्म चुसिरहने ? | Ratopati
सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइप्रति
विदेशी भूमिबाट नेपालीहरु भन्छन्, ‘सरकार ! गरिब जनतालाई कहिलेसम्म चुसिरहने ?
सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइप्रति गत सोमबार सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्केका नेपालीहरूबाट जफत गरिएको २ करोडभन्दा बढी मूल्य बरबारको सामानहरूको लिलामीको सूचना निकाल्यो ।
सरकारले विदेशबाट नेपाल फर्कंदा अधिकतम ५० ग्रामसम्मको गहना लगाएर वा लिएर जान पाइने, बढीमा एक लिटर वा एक बोटल रक्सी लान सकिने, एक/एक थान ल्यापटप, कम्पुटर वा ट्याबलेट, घडी क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, सेलुलर, मोबाइल फोन लैजान पाइने झिटीगुन्टा आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा गरिएको कडाइबारे संयुक्त अरब (इमिरेट्स) युएईका नेपालीहरू के भन्छन् ? प्रस्तुत छ, रातोपाटी युएई संवादाता विनोद श्रेष्ठलेसराेकारवाला गरेकाे कुराकानी :–
एनआरएन, मध्यपूर्व उपसंयोजक
एकजना नेपाली नागरिक जो स्वदेश छोडेर विदेसी भूमिमा काम गर्छ, अनि केही आर्थिक जोहो गर्छ । बचत रकमबाट आफ्नो घरायसी वा व्यक्तिगत जीवनको लागि काम लाग्ने सामान कानुनतः खरिद गरी आफ्नो देश जाँदा विमानस्थलबाट नै जफत गरिनु राम्रो हैन ।
हरेक देशको नागरिकलाई आफ्नो सुविधाको लागि प्रयोग गर्ने सामान लैजाँदा यसरी जफत हुने नियम कहिँकतै देखिएको छैन । यसर्थ यस्तो विषयमा आवश्यक अध्ययन नै नगरी मेहनतबाट उपार्जन गरेको सामानमा एक हदबन्दी लगाइएको हो भन्ने सबैको बुझाई छ । सरकारले लागू गरेको नियमको खारेज हुनुपर्छ ।
सचिव (पत्रकार महासंघ युएई शाखा)
म आफैँ पनि विदेशमा २ वटा मोबाइल चलाउँछु । नेपाल जानुपर्यो भने के गर्ने ? बुबाले ‘मोबाइल पठाइदे न छोरा’ भन्नुभएको छ । के गर्ने ? आम मजदुर जनताका यस्ता व्यवहारिक कठिनाइलाई सरकारले ध्यानै दिएन ।
काँचो सुन लैजान प्रतिबन्ध लगाएको छ । १०÷२० ग्राम सुन लगेर बुढीआमा र श्रीमतीले भने बमोजिमको गहना बनाएर लगाउने सपना पनि सरकारले तुहाइदियो । इमान्दार जनताहरु सरकारको यस्ता पाल्सी नियमको मारमा परेका छन् ।
तस्करहरुले त अहिले पनि औंठी बनाएर लगिरहेकै छन् । आजकल त धेरैजनाले काँचो सुनलाई बेरुवा औँठी बनाएर लैजान थाले । हामी जस्ता इमान्दार प्रवासीलाई जबर्जस्ती तस्कर बन्न प्रेरित गर्ने नियम किन बनाउने ?
विदेशमा नेपालमाभन्दा कता हो कता सस्तो छ । विदेशमा काम गर्नेहरुले २/४ बोतल ह्विस्की लगेको पनि सरकारले देखि सहेन । तस्करी पो रोक्नुपर्यो त, घरायसी प्रयोगको लागि किन रोक्ने ? किन दुःख दिने ?
पूर्वसभापती (जनसम्पर्क समिति)
रेमिट्यान्सले देश थामेको छ । अझैँ भएन भनेर विदेशबाट किनेर लगेको सामान मोबाइल, घडि, रक्सी जस्ता सामान बरामद गरेर लिलाम बिक्री गर्ने सरकार ? ४ अर्ब वाइडबडी जहाज काण्ड, ३३ किलो सुनकाण्ड, बुढीगण्डकी, एनसेल घोटाला काण्डमा अर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा एक शब्द बोल्नु छैन ।
कार्बाही त परै जाओस्, विदेशमा बस्ने नेपालीको सेवासुविधा र सुरक्षाको बिषयमा कहिल्यै पनि चासो र ध्यान दिएको छैन । अवस्था कति जटिल र संवेदनशील छ, बुझ्ने प्रयास सरकारले गर्नुपर्छ ।
युवालाई रेमिट्यान्सको नाममा विदेश बेचेको छ, स्वदेश फर्काउने कुनै योजना र कार्यक्रम छैन । सरकारले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हो । दुःख दिने र ठग्ने होइन ? सरकारको यो काम जनविरोधी हो ।
पासाङ रेन्जी शेर्पा
अध्यक्ष (आदीवासी जनजाती महासंघ, युएई)
नियम/कानुन भन्दा माथि कोहि हुँदैन । विदेशबाट आउने सबै नेपाली नागरिकहरुले सरकारले तोकेको झिटीगुन्टाको नियमअनुसार सामान मात्र ल्याउने हो भने समस्या नै आउँदैन । यहाँ झिटीगुन्टाको बहानामा यात्रुहरुलाई भरिया बनाएर सरसमान पैठारी गर्ने साना तस्करहरुको समेत कमी नभएको हुनाले राज्यको मुख्य आयको श्रोत मध्ये एक भन्सारमा कडाइ गरिनु आवश्यक छ ।
अर्बौं घोटाला गर्नेहरु फन्दामा नपर्ने, किलोका किलो सुन सजिलै छिर्ने । तर सामान्य यात्रुको एक बोत्तल अतिरिक्त रक्सी नछिर्ने बेथिती जनसाधारणलाई चित्त नबुझेको कुरा हो ।
संयोजक (अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज, युएई)
तर विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाई÷दिदीबहिनी घर जाँदा आफन्तलाई उपहार स्वरूप लागेको एउटा मोबाइल, घडी, रेडियो, टिभीलगायत अन्य सामान र मदिराजन्य पदार्थ बरामद गर्नु लज्जास्पद छ ।
त्यसलाई बरामद नगरी निश्चित मात्राभन्दा बढी लागेमा राजश्व तिरेर लैजान पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुको सट्टा जफत गर्ने जुन शैली अपनाउनु राम्रो हैन ।
सेक्युरिटी सर्भिस युएई
दुःख लाग्यो सरकार । विदेश जाँदा बोकेको २ बट्टा अचार र फर्कंदा ल्याएको १ बोटल रक्सी समातेर लिलामी गर्दा ती ५० लाख विदेशिएका युवायुवतीले पठाएको रेमिट्यान्सले सरकार र देशको अर्थतन्त्र चलेको सर्वविदितै छ ।
लिलामी नै गर्ने हो भने त्यो ३३ किलो सुनको गर, समात्ने नै हो भने वाइडबडीमा ४ अर्बको भ्रष्टाचार गर्नेलाई गर । आयल निगममा १८ करोड खाने, एनसेलमा ६३ अर्ब अनि बुढिगण्डकीको ९ अर्ब खानेलाई समात्ने हिम्मत छ ? हैन भने गरिब जनताले विदेशमा रगत र पसिना कमाएर घर फर्कंदा एयरपोर्टबाट रुँदै निस्कुनु पर्ने किन त ? विदेश जाँदा मेनपावरले लुट्ने, मेडिकलले लुट्ने, दलालले लुट्ने, इन्स्योरेन्सले लुट्ने, अनि श्रमले लुट्ने, हेल्लो सरकार...गरिब जनतालाई सधैँ लुटिरहने र चुसिरहने ?
हातेमालो समूह अबुधावी युएईको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न